Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe ọmụma dị ukwuu ga-azọpụta? | Apg29
Ị na-adịghị a akpan akpan ike ihe ọmụma nke Bible ma ọ bụ na-ewere ihe ga-azọpụta. Naanị ihe ị chọrọ bụ na-anabata Jizọs Kraịst dị ka Onyenwe na ndụ gị.
Ọ bụ nanị mgbe ahụ, mgbe ndụ mmadụ nke Jizọs Kraịst na-abịa n'ime ndụ gị na ị ga-azọpụta. M nabatara Jizọs dị ka Onyenwe mgbe m dị afọ 20. My dum ndụ e gbanwee. Jizọs bịara m, zọpụta m na-agbaghara m nmehie m nile.
Anyị bụ ndị nke Chineke. Onye ọ bụla maara Chineke na-anụ anyị. Onye ọ bụla na-abụghị nke Chineke adịghị ege anyị ntị. N'ihi ya, anyị maara na mmụọ nke eziokwu na delusion spirit. - 1 John 4: 6
Ebe ọ bụ na m na-azọpụta, e kpughere otú a kpọmkwem na ha na-agaghị azọpụta ha n'ihi na ha egeghị ntị m. N'ụzọ dị otú a na-mara ozizi nduhie ngwa ngwa. Ha na-ekwu na ha nwere Jesus ma na-achọghị na-ege ntị ndị nwere n'ezie Jesus, mgbe ahụ, ha na-adịghị Jesus.
Ọtụtụ mgbe m zutere ozizi nduhie na-azọrọ na ha nwere Jesus, na ha nwere n'otu oge-agbalị iji nweta m na ha na delusion site egbusi opi m ozizi na-akawanye anya gị n'ebe Jesus. Ọ bụrụ na ha na n'ezie e zọpụta na mara na Jizọs abụghị gbalịrị ime ihe ọ bụla dị ka na.
Anyị ga mara onye zọpụta anyị, na onye bụ Onye Nzọpụta. Mgbe m na-agba akaebe m na nzọpụta Jizọs Kraịst, m na-emekarị na-ekwu na ọ bụ na a na chọọchị na-zọpụta m, ọ bụghị a pastọ ma ọ bụ onye ọ bụla na-amụta. Ma, ọ bụ ndụ mmadụ nke Jizọs Kraịst na-abata m n'obi mgbe m natara ya.
Ọ bụ naanị Jizọs na ọ dịghị onye ọzọ karịa ọ pụrụ ịnapụta. Ọ bụ naanị onye nzọpụta. Ọ dịghị otu n'akụkụ ya, ma ọ bụ naanị Onye Nzọpụta. The Bible na-ekwu na ọ dịghị onye n'okpuru heaven pụrụ ịzọpụta anyị. Ọ bụ naanị Jizọs na ọ bụ naanị ndị nwere ike ịzọpụta.
E nweghị nzọpụta na ihe ọ bụla ọzọ. N'ihi na ọ dịghị ndị ọzọ aha n'okpuru eluigwe, nke e nyere n'etiti mmadụ nke anyị ga-azọpụta. - Ọrụ 4:12
Nwere ike ọ bụghị nke ukwuu
Mgbe m malitere zọpụta, m nwere ike ọ bụghị nke ukwuu na Bible. N'eziokwu, m nwere ike ime ihe ọ bụla. Tupu m na-azọpụta, m gara nzukọ abụọ na Pentikọstal Church na Ljungby. M wee ihe ọ bụla nzukọ ndị a, ma m maara na ọ bụ ihe na Jizọs na m mkpa. Mgbe ahụ, onye jụrụ m ma m chọrọ ka a zọpụta. M zara ee., Ọ bụ ezie na aghọtaghị m ihe ọ bụla ma ọ bụ a pụrụ iche ihe ọmụma dị ukwuu. Ma mgbe m natara Jesus, m n'ezie zọpụta! Otu nzọpụta ziri ezi obi m mgbe m natara Jesus Christ dị ka Onye Nzọpụta m na-nwe-ayi!
Ị adịghị mkpa ka nwere a pụrụ iche ihe ọmụma dị ukwuu nke Bible ma ọ bụ na-ewere ihe ga-azọpụta. Naanị ihe ị chọrọ bụ na-anabata Jizọs Kraịst dị ka Onyenwe na ndụ gị. Ọ bụ nanị mgbe ahụ ka dị ndụ mmadụ nke Jizọs Kraịst ga-abịa n'ime ndụ gị na ị ga-azọpụta. Mgbe ọ na-abịa n'ime obi gị, ọ na-eme a kere eke n'ihi na ị. Ọ bụ onye na-eme ka ọrụ ebube, ọ bụghị gị.
Ya mere, ọ dịghị aka ma ọ bụrụ na i nwere niile na ihe ọmụma dị ukwuu ma adịghị natara Jesus. Ọ dịghịkwa mkpa na ọ bụrụ na unu enweghị ihe ọmụma mgbe ị na-enweta Jesus. Ọ bụ onye na-eme ka ọrụ ebube ná ndụ gị n'ihi ebere ya.
Ọ bụrụ na mmadụ na-abịakwute gị na-ekwu na ị ga-enwe ihe ọmụma na-azọpụta, ọ bụ ụgha. Ọ bụrụ na mkpa pụrụ iche ihe ọmụma, nke a pụtara na ọ bụ ihe ọmụma na-azọpụta ma ọ bụghị Jizọs Kraịst. Ọ na-ahụ na-eme na ihe ọmụma nke Onye Nzọpụta. Ọ dịghị, e bụ Jizọs, na ọ bụ naanị ya bụ Onye Nzọpụta! All ị chọrọ bụ Jizọs Kraịst ga-azọpụta. Ekwela ka ihe ọ bụla-ewepụ anya gị n'ebe Jesus Christ.
The ihe ọmụma ga na-eto eto ka
Ma, ozugbo ị na-azọpụta, na ihe ọmụma ga-ndammana ịmụba na-eto eto ka Jizọs dị ka Bible na-ekwu.
Ka unu wee na-eje ije kwesịrị nke Jehova na ihe niile na-amasị ya, na-amị mkpụrụ n'ezi ọrụ ọ bụla na-eto eto na ihe ọmụma nke Chineke. - Carbon 1:10
The ihe ọmụma ga na-eto eto n'ihi na ị na-azọpụta, ọ bụghị n'ihi na ị ga-azọpụta. Nke a bụ ihe dị mkpa eziokwu na anyị ga-egosi ụzọ dị iche iche na akwụkwọ a. M ga-echefu ụbọchị m malitere zọpụta. Mgbe m na m dị afọ 20. Na m akwụkwọ na-eme atụmatụ ndị fọdụrụ n'ezinụlọ abalị m na-agwa banyere nzọpụta m, ma m ga-enwekwa n'isiakwụkwọ na-esonụ na nkenke ikowa otú o mere.
Vecka 29, måndag 15 juli 2019 kl. 20:22